Cabsiga Soomaalida ku ganacsata South Africa - BBC Somali
Cabsiga Soomaalida ku ganacsata South Africa
Image caption Soomaalida ku nool South Africa
Soomaalida ku ganacsatada deegaano kala duwan oo ku yaalla dalka Koonfur Africa, ayaa muujiyay in ay cabsi fara badan ka qabaan marka ay dhamaadaan ciyaaraha kubadda cagta adduunka lagula kaco falal dhac iyo dil ah.
Qaar ka mid ah dadkan, ayaa BBC u sheegay in ay dadka reer Koonfur Africa qaarkod ugu hanjabaan in ay hantidooda la wareegayaan marka ciyaaruhu dhamaadaan ama la dili doono.
Soomaali badan oo ganacsiyo ku leh South Africa, ayaa horay loo dilay, iyagoo laga soo bilaabo 25-kii May dalkaas lagu dilay ilaa 7 qof oo Soomaali ah oo ay u dambeeyeen 2 nin oo dukaanku lagu weeraray khamiistii,lana dilay.
Hadaba, weriyaha BBC Cabdirisaaq Catoosh,ayaa magaalada Johannesburg kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada oo ay uga sheekeeyay cabsiga iyo walwalka ay qabaan.
Waxay siyaabo kala duwan uga hadlayaan dhibaatooyin soo gaaray, dukaamo ay lahaayeen oo qaarkood la dhacay, qaar si joogto ah loogu hanjabo.
Dhibaatadii ugu dambaysay waxay soo gaartay maalmo ka hor, iyadoo 4 dhalinyaro ah oo dukaan lagu weerary ay laba ka mid ah dhinteen, halka labadii kalena iyagoo dhaawac ah yaallaan isbitaalka.
Ilaa Dhamaadkii bishii May, waxaa dalka Koonfur Africa lagu dilay ilaa 7 qof oo Soomaali ah.
Soomaalida ku nool dalka Koonfur Africa, ayaa intooda badan ah dad shaqaysta oo ganacsi ku howlan.